Ahoana no ahalalako raha kely loatra ny bisikiletako? - Hitaingina Bisikileta
Tena > Hitaingina Bisikileta > Ahoana no hamantarana raha mifanaraka amin'ny bisikileta - valiny sy fanontaniana mahazatra
Ahoana no hamantarana raha mifanaraka amin'ny bisikileta - valiny sy fanontaniana mahazatra
Ahoana no ahalalako raha kely loatra ny bisikiletako?
Ahoanahilaza rahaizanykely loatra? Apetraho nybisikiletahatramin'nynysantionany (haavon'ny seza, ahatratrarana, fihemoran'ny lasely, fantsom-batana hatramin'ny hahavon'ny lasely) avy eo mijoroa ary zahao izany.RAHAtoa tsy mety izany ary tsy mifanaraka amin'ny laoniny (toa izanyKOAbetsaka saLittleseza fipetrahana, fotonyKOAlava nafohy) dia diso izany. r.
Inona no mitranga amin'ny tafondro gazy eto ary amin'ity fizarana ity dia miresaka momba ny karazana Mixby Excising sy Bike Fitting aho izay efa nanao lahatsoratra momba ny haben'ny bisikileta, izany hoe ny fomba hisafidianana ny géometry sy ny haben'ny bisikileta ho anao ary avy eo dia ho antsika fa ny bisikileta mifanaraka amin'ny filantsika dia mampifanaraka ny fombantsika mitaingina ny fahaizantsika sy ny vatantsika mazava ho azy ary avy eo dia noresahiko fotsiny ilay olana antsoina hoe toe overlap na kiraro mifanindry izay midika fa tsy manana izany aho eto fa midika izany fa afaka mora ny mahazo ny kodiarana aloha amin'izay azoko mikasika ny kiraroko, azoko atao izany, angamba kely fotsiny, fa raha ny tena izy dia tsy misy olana amin'ny fifandimbiasana amin'ny lela amin'ity bisikileta ity ary rehefa niresaka an'izany aho tao amin'ny lahatsoratra dia maro aminareo, indrindra amin'ny poloney iray ahy, manana Channel, nanomboka nanontany ahy, midika ve izany raha mikasika izany aho? Ny kodiarana eo alohan'ilay kiraroko dia midika fa kely dia kely ho ahy ny valiny, tsia ny valiny, tsy midika izany fa mila manova ny endriny tanteraka ianao, fa raha betsaka izany, raha izany no izy? Tahaka ny fanananao ny olanao na dia mikasika ny sisiny aza, izay mety ho olana, na eo aza izany, misy geometry maro samihafa ao amin'ny bisikileta izay somary lehibe io indraindray io.
Inona no heveriko fa tokony hotadidintsika? Tokony hotadidintsika fotsiny ve ny fomba fitondrantsika fiara? ahoana no hampiasantsika ny bisikileta inona no hampiasainay ny bisikileta raha tianao ny asehoko anao ny tànan-tongotra mifanindry izay miseho rehefa entina eo amin'ny famolahana ary fehiloha be dia be io eto ka matetika no mahasosotra ny hafainganam-pandeha ambany na eny ivelan'ny lalana na amin'ny tanàna. Ka raha manamboatra bisikileta marobe ianao amin'ny fivezivezena ary mety misy aza ny làlan-kaleha na mandehandeha eny an-tanàna fotsiny aza dia mila mieritreritra bebe kokoa momba ny fihodinan'ny rantsan-tongotra ianao satria hisy fiolahana maranitra maranitra amin'ny hafainganam-pandeha ary avy eo mampidi-doza ho anao ary mora be ny hianjera ka ahoana no hahitantsika raha mifanindry amin'ny fefy nomena isika na tsia izay tena tsy manampy? s ny halavan'ny fantsona ambony dia malaza be ary ny mpanamboatra sasany tsy hanome anao refy hafa akory, lazao fotsiny ny halavan'ny fantsona ambony. myCannondale tapaka 10 dia 50 sm ny halavany ary ny halavan'ny fantsona ambony dia 50 santimetatra izay milaza aminao momba ny zana-kazo momba ny habeny fa tsy milaza aminao na inona na inona momba ny geometry izy izao izay tiako holazaina dia avelao fotsiny aho hampiseho aminao hoe aleo lazaina ity dia ilay Top Tube ary manova ny zoro an'ilay fantsona ambony aho mba ho 56cm ny fantsakako ambony, raha zahana ny zoro dia 55 zoro toa ity zoro 54 ity toa ity 52 ity mba ho hitanao ny halavany ny fiovan'ny fantsona ambony an'ny fantsona ambony eto, fa ny elanelana misy eo amin'ny fononteny ambany sy ny kodiarana eo aloha dia tsy miova ka ny halavan'ny fantsom-batana ambony dia iray amin'ireo refy, fa ny tena zava-dehibe dia ny elanelana, ny elanelana misy eo amin'ny fononteny ambany sy ny anao sy ny lohanao dia tsy dia marina fa marindrano, ka ity elanelana misy eo amin'ity teboka ity sy ity teboka ity dia manantena aho fa ho hitanao fa io no ho fari-tanako ka tena fantatro hoe mandra-pahoviana no eo alohako ilay sary. tsy miova izany fa ity no toerana rehefa mandeha an-tongotra aho ary te-handro w aiza ny ahy ary aiza ny sandriko ary mazava ho azy fa aiza ny kodiarana eo aloha ka rehefa mampiasa ianao rehefa manamboatra bisikileta cyclocross na nasehoko anao ity fampitana ity teo amin'ny famerenana ohatra ary mila mandray ilay olana mifanindry hatrany ianao. kaonty hasehoko anao fotsiny ny fahasamihafana nisy teo amin'ireo zana-kazo roa ireo, ity dia 54 sentimetatra kapten dia 56 santimetatra no hametrahako ny rano indray mitete avy eo amin'ny fikororohana amin'ny toerana tena izy ka apetraka fotsiny toy izany ary ankehitriny andao mandeha fotsiny ny fakantsary dia ho hitanao ny hiafaràn'ny fononteny ambany, azonao atao ny mahita fahasamihafana lehibe eo amin'ny Cannondale ary tena fahasamihafana lehibe izany, amin'ity bisikileta tena izy ity dia azo antoka fa be loatra ny zavatra tsy maintsy ampitaina satria ny ketako ambany dia tahaky ny v tsy misy roa santimetatra, maninona no raha fohy kokoa ity izay 54 sm ny halavany dia hazo fijaliana izay bisikileta CX Cyclecross ka fohy kokoa noho izany dia manana toerana mahitsy kokoa ianao ary koa ny bracket ambany dia ambany bracket dia ambony be satria bisikileta acyclocross io, noho izany ny olana mifanindry amin'ny kiraro dia 54 santimetatra amin'ity fefy ity ohatra tsy tsara ho ahy hoy aho nanoratra ny synapses kendall manana ID iray amin'ny iray aho, io ilay alim-by 154 sentimetatra ary nanana an'ity olana nifanindry rantsan-tongotra ity aho fa ny fampiofanana ion fotsiny no nampiasako tamin'ny sasany efa fantatrao momba ny zon'ny mpamily ary tsy mbola nanana an'io olana io aho, midika izany fa tsy nokasihako ny kodiarana voalohany tamin'ny kiraroko rehefa nitondra fiara aho mba hahafahako mampiasa 54 fa mahatsapa tsara kokoa ny 56 aho ary arak'izay azonao atao jereo fa tsy misy olana mihoa-pefy eto mihitsy.
Raha manana ny frame ianao izao ary mieritreritra ianao, okay, raha toa izany i Dennis dia mila ahy ihany ny manolo ny frame, ankehitriny dia tsy mila manao izany ianao satria misy fika vitsivitsy azonao atao hanamboarana an'ity olana, ny iray amin'izy ireo dia ny manova ny fork ary na dia mametraka ny fantson'ny lohany izay manana zoro iray aza ny tsirairay ary eto dia tsy azonao ovaina amin'ny bisikiletanao izany, fa ny forkna dia mety manana halava samy hafa, fa ny zoro sy ny samy hafa kosa offset offset, araka ny hitanao fa offset toy ny any aoriana ity iray ity mba hanafohezana ny velaran'ny kodiarana. Azonao atao ny mampiasa fork isan-karazany mba hanampiana anao hahita ny toerana mety amin'ny kodiarana eo aloha. Tadidio fa ny famindrana ny kodiarana eo anoloana mankany aloha amin'ny bisikileta sy mankany aminao dia hanova ny géometry sy ny fitondran'ny bisikileta koa, tadidio fa zavatra iray azonao atao izany, ny iray hafa dia, kiraro mora mifamadika, izay mety ho iray amin'ireo mora indrindra vahaolana roa eto, ary tsy midika izany hoe mila manova ny haben'ny kiraro ianao dia ho kely loatra indray ho anao fotsiny mba tsy hanananao an'io olana mihoampampana io fa ny olana mifanindry kosa dia samy hafa ny endrika misy ny kiraro. ianao dia afaka? Mitadiava bika amin'ny kiraro izay tsara kokoa aminao ary avy eo ny farany dia ny halavan'ny sandry lava.
Tena angano fa ny bandy rehetra misy enina metatra ny halavany dia tokony ho 172 2,5 milimetatra ny halavan'ny crank sandako afaka mandeha 170 izay hiova ho ahy angamba aho hanova ny tahan'ny fitaovana, fa maro ny mpitari-dalana bisikileta efa za-draharaha no hilaza aminao fa amin'ny fotoana maharitra te hitahiry angovo aza ianao, ohatra toerana dimy milimetatra fanampiny eo anelanelan'ny kodiarana eo aloha sy ny axis an'ny pedal no tianay holazaina fa izay hodinihinay, izay tsy azonao ovaina, dia ny tavy, satria ny paty dia tokony ho eo amin'ny toerana tonga lafatrao amin'ny tongotrao ary izaho ' Raha ny lahatsoratra momba an'io dia mazava ho azy fa amin'ny fizarana Bikefeeling manaraka ihany no hatao, noho izany ho an'ity tanàna mihoa-pefy ity dia tsy tokony hanahy be loatra ianao, fa raha olana goavana kosa izany dia soloina ny ampahany amin'ny bisikiletanao ary soloo ny Ra Even raha te hampiasa azy manodidina ny tanàna ianao ho bisikilety amin'ny komuter na toy ny bisikileta kely marobe toy ny amin'ny làlana sasany dia omeo ankihiben-tànana aho hahafantarako fa tokony hanao bebe kokoa an'io aho raha tianao ny playlists hafa ao amin'ny fantsona azafady mba omeo aondrako ankihiben-tànana aho, aza matahotra fa ho hitako fotsiny izay ho raisiko ho anao, misaotra ry zalahy noho ny fanohananareo ary hahita anao vetivety, veloma
Ahoana no ahitanao ny haben'ny bisikiletanao?
Fomba faharoa: manisa nyhabe bisikileta:
Esorynykiraro ary mijoroa miarakanytongotra eo amin'ny 15-20 cm eo ho eo (6 '- 8') no misaraka. Refesina ny hahavony hatramin'ny tanynycrotch.
Aza hadino ny karazanabisikiletatianao: Mountainbisikileta, tanànabisikiletana lalanabisikileta.
Afaka mandray izao ianaonykajy arykajyny marinaSize:
15 Jona. 2021 g.
Manao ahoana ny endrik'ilay bisikileta tsara?
Ny fomba vaovao: Rehefa mipetraka tsara amin'ny lasely ianao dia ianaotokonyafaka mahatratra mora foana ny tampony sy ny saron-doha amin'ny arabebisikileta, na ny fihazonana eny an-tendrombohitrabisikileta. Ny kihotokonymiondrika kely fa tsy mihidy. Ary ny mahia amin'ny vatanaotokonytohanan'ny ivonao amin'ny toerana milamina.26 Jona. Feb 2020
(mozika miroborobo): Ny fahazoana ny fototr'ilay bisikileta tsotra tsara dia tsy sarotra. Miresaka zavatra toa ny haavon'ny lasely aho. Saingy misy fanovana an-tsokosoko vitsivitsy azonao atao izay handeha lavitra amin'ny fanovana ny fahatokisanao ny bisikileta, ny fampiononanao ary angamba ny hafainganao ihany koa. - Eny, ary ny fanaovana bisikileta matihanina mety ho lafo be.
Ka misy sioka enina azonao atao mba hahazoana izany toerana lavorary izany no tiako holazaina hoe iza no tsy maniry izany? - Heveriko fa tianao izany? - Enga anie aho, tsia. - Betsaka ny zavatra azo atao eto, James. (sento) (mozika mitombo) - Ary hanomboka amin'ny fihodinan'ny tohana isika, satria azo antoka fa tsy izany no zavatra eritreretin'ny ankamaroan'ny mpitaingina rehefa tonga ny fotoana hipetrahana eo amin'ny bisikiletany.
Saingy ny fihodinanan'ny tananao, mandroso na mihemotra, dia afaka manisy fiovana lehibe amin'ny fahatsapana ny bisikiletanao eo ambaninao. Raha ny zava-misy dia mety misy fiovana lehibe ny toeran'ny tananao eo amin'ny kitanao. Tena ilaina ny milalao miaraka - eny, ka rehefa manomboka mihodinkodina ny fonon-tànanay isika dia mahatratra lavitra kokoa ary mampitombo ny fidinana eo anelanelan'ny haavon'ny soavaly sy ny kapaoty anao, hahatonga anao ho aerodynamika bebe kokoa ary, midina ambany kokoa eo amin'ny farany farany .- Etsy an-danin'izany, raha manodinkodina mankany aoriana ny tadin-tànanao ianao na manetsiketsika ny tampony manodidina ny fitoeran-tànana dia manana fahatsapana ho voafandrika amin'ny bisikileta ianao, ary samy manana ny fihenananao ianao ary hihena koa ny mitete - Eny, ka makà fiaran-dalamby sy andrana mba hahafahanao misafidy ny toeranao. (mozika miakatra) Ankehitriny, ankoatry ny fihodinan'ny tehinao, dia azonao atao ihany koa ny manandrana manova endrika tanteraka.
Compact dia famoronana vaovao amin'ny bisikileta an-dalambe. Nanjary nahazatra kokoa izy ireo tao anatin'ny folo taona lasa, satria ny fitanana ny làlana dia nisy fidinana lalina tokoa, ary midika izany fa ny fahasamihafana misy eo amin'ny toeranao amin'ny hood raha oharina amin'ny latsaka dia tena nisy dikany - eny, ary betsaka ny mpitaingina fiara dia tsara izany, ambany tsy mahazo aina, noho izany dia namorona iray voafintina izy ireo izay mamela anao ho latsaka amin'ny dia lavitra nefa tsy mahazo aina. Ity no tsara indrindra ho an'ireo mpitaingina mahery setra - ka jereo. - Ny tiako holazaina dia tena toa ahy - Mihevitra ianao fa mahery setra sa tsy izany? - Ie - Zahao ny bara azonao any an-trano ary raha manana ny endrika nentim-paharazana taloha izy ireo ary milatsaka lalina tokoa, ary hitanao fa tsy mahazo aina ianao amin'ny saron-doha na ravina, avy eo mety ho mendrika ny manandramana amin'ny paosin-tanana ary angamba fotsiny mindrana fa tsy mandoa ny lany alohan'ny manapa-kevitra izay mety aminao. (mozika upbe) Avy eo ny famerenana.
Ity no layback saddle, izay mahomby ny halaviran'ny laselyo ao ambadiky ny afovoan-trano ambany. Mandeha tafahoatra ianao. Araka ny fomban-drazana, ny bisikileta mihazakazaka dia manana layback somary lehibe, mahatonga azy ho lavitra lavitra ny ambany bracket.
Ary etsy ankilany dia manana mpitsapa fotoana ianao, ary ny tena mafy kokoa aza, dia manana triathletes izay tsy manana fatiantoka velively ianao - eny, ary ny fihemorana diso dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny zava-bitanao ary, oh, mahazo olana maro amin'ny lohalika aho. tsy te-hahaliana, ary ny mahaliana dia vita ny fanadihadiana iray izay mampiseho fa voafintina kokoa ny lohalika rehefa miverina lavitra ilay lasely - eny, izay nifanohitra tamin'izay nolazaiko mialoha - ekeko. - Tadidio fa rehefa manandrana ny fiovaovan'ny lasely ianao dia hanova ny halaviranao ihany koa. Aza hadino izany fa ao an-tsaina, ary na dia mandroso ny laselinao aza ianao ohatra dia mila manainga kely azy kely koa ianao. (Mozika mitohy) Manaraka, mitongilana ny lasely.
Minoa na tsia, ny International Cycling Federation na ny UCI dia nandrara ireo mpitaingina matihanina tsy hametraka ny lasely mandritra ny taona vitsivitsy. Satria noheverin'izy ireo fa mampivoatra fampisehoana amin'ny fomba iray izany, ary midika izany fa nanana mpitaingina matihanina maromaro izahay nitaraina noho ny maha-moana sy fahaverezan'ny fahatsapana anao amin'ny toerana iray izay tsy tena tadiavinao very ny fahatsapanao. - Eny, tsy dia be loatra.
Mba hanitsiana an'ity toe-javatra ity dia azonao atao ny manongilana kely ny oronao mankany ambany, izay ahafahanao mampiasa hery bebe kokoa amin'ny toerana aerodynamika kokoa, ary manamaivana be ny perineum anao, izay mampahazo aina kokoa ny dianao. - Izy io koa dia afaka manampy raha toa ny mpitaingina anao manana fironana hijanona amin'ny fiakarana lava satria, amin'ity toe-javatra ity, mahitsy ny laselyo, rehefa mizotra ny arabe, dia mety hahatsapa ny lalana fa mijanona eo ambadiky ny lasely ianao. (Faly mozika) Ity dia tokony ho iray amin'ireo faritra tsy voahitsy matetika amin'ny bisikileta, izay hafahafa satria mety hisy fiovana lehibe eo amin'ny fahatokisanao sy ny fifehezana ny bisikileta.
Noho izany, ny ankamaroan'ny endrika maoderina vita amin'ny frein sy ny fitaovana dia mamela anao hanitsy ny halaviran'ny lever amin'ny paosin-tànana, izay tena ilaina indrindra ho anao izay manana tanana kely kokoa satria raha tsy afaka mahatratra mora ny tadin'ny frezy ianao dia tsy hisy fiantraikany fotsiny izany. ny fitondran-tenanao freins, fa ny fahaizanao mamindra fitaovana koa. Izay mahasosotra indrindra ary mampidi-doza indrindra amin'ny ratsy indrindra .- Ny anao, ary ny levera samihafa dia napetraka amin'ny fomba samihafa.
Fa amin'ny ankapobeny dia misy visy kely ao ambadiky ny hood izay azonao ampiasaina hanitsiana ilay levera. Te-hahatratra tsara ny leverinao amin'ny saron-tava sy rano mitete ianao. Ary raha mila manamboatra ny tananao ianao dia ilaina angamba ny mametraka kely ny levers anao mba hampilamina azy fotsiny. (mozika mitohy) - Ary farany, manana ny halavan'ny lavaka izay azo ekena fa mety ho lafo tokoa isika hanaovana fanandramana.
Ka raha te hanandrana manova azy ianao dia mindrana cranks samihafa aloha. Hevitra vitsivitsy momba ny fisafidianana ny halavan'ny crank mety indrindra anao. Voalohany, ny karazana mitaingina, faharoa, ny iraka tianao.
Ary mazava ho azy ny halavan'ny tongotra koa. Amin'izao fotoana izao dia misy ny fironana handeha ho fohy kokoa raha ny cranks no resahina. Voalohany, manampy anao izay maniry gadona ambony io.
Faharoa, ho an'ireo mpitsapa fotoana sy triathletes dia mahita ny valahany manokatra zoro izy ireo ary manamora kokoa ny mitaingina izany aero mahery setra izany. - Eny, ka raha sahirana ianao amin'ny famoahana an'io fampisehoana io amin'ity toerana aerodynamika ity dia mety hoheverinao ny hanafohezana ny halavan'ny volonao. Nefa tadidio fa raha manafoana ny halavanao ianao, dia ataovy izay hanitsiana ny haavon'ny laselyo.
Ohatra, raha mandeha lavitry ny lavarangana lava manodidina ny 2,5 milimetatra ianao, dia alao antoka fa hampidina ny haavon'ny laselyo amin'ny 2,5 milimetatra ianao, fomba roa hampahazo aina anao kokoa amin'ny bisikileta sy mety araka ny hitanao, tsy ' vidiny lafo, na zara raha misy, tena vola.
Ka tsy mila mandany an'izao tontolo izao ianao amin'izay hahatonga ny tenanao ho amin'ny toerana tonga lafatra. Ny tokony hataonao dia ny mampiasa vola amin'ny fotoanao manokana, ary manolo-kevitra anao izahay hanampy ihany koa Manamboara fanitsiana, mariho izay nataonao, ary na dia sarimihetsika amin'ny tenanao amin'ny bisikileta aza ianao, amin'izay hahitanao ny endriny. - Eny, ary ireo ihany? ny sioka kely dia nanampy ahy hahatsapa ho mahazo aina kokoa amin'ny bisikileta, ary raha nanampy anao izy ireo dia maninona raha omena ankihibe ity lahatsoratra ity ary raha manana hacks izay tsy nahomby izahay hahatonga anao hahatsapa ho mahazo aina kokoa amin'ny bisikileta iray, dia ampahafantaro anay amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany. - Eny, azo antoka, raha misy zava-dehibe amin'ny fotoana bisikiletanao tianao hizara aminay ary raha ny tena marina amin'ireo mpijery anay dia tianay ny handre anao.
Ankehitriny dia manana lahatsoratra hafa ho anao izahay izao. Ity no zavatra nataon'i Emma roa herinandro lasa izay. Ireto misy torohevitra momba ny fametrahana ny bisikileta ho an'ny olona fohy volo.
Raha izany no izy dia tsindrio fotsiny eto. - Ie hataoko izany.
Tokony hikasika ny tany ve ny tongotrao rehefa mipetraka amin'ny bisikiletanao?
Ny haavon'nynyny lasely dia zava-dehibe amin'ny toerana faran'izay mahazo aina sy ny fomba mitaingina azo antoka. Rehefa ianaofitorevahanaeo amin'ny lasely, izy roatongotra tokonymahatratra nytanyary ny baolin'itokony ny tongotraohomikasika ny tany.
Tena zava-dehibe ve ny haben'ny bisikileta?
Sizy bisikiletaTsy ny lohahevitra mahaliana indrindra tokony hianarana momba azy, fa io no iray amin'ireo zava-dehibe indrindra. Manana ny zohabe bisikiletadia tsy azavatra izanyny fampiononana - afaka misoroka ny ratra amin'ny fotoana fohy sy maharitra, ary mamela anao hanana traikefa mitaingina tsara kokoa vokatr'izany.8 Jona. Feb 2020
Inona no dikan'ny bisikileta 26 mirefy?
Ny haben'ny kodiaranadia nyfandrefesana ny savaivon'ny kodiarana amin'ny kodiarana nitaingina. Matetika ny habeny dia soratana eo amin'ny sisin'ny kodiarana, ohatra, mety hamaky izy26x 2.2 ', tendrombohitra mahazatrabisikiletahabe. Ity dia manondro ny kodiarana dia26”Ary ny kodiarana dia 2.2” ny sakany. Làlana antitrabisikiletamety misy kodiarana 27 ″.
Tokony hikasika ny tany ve ny tongotrao rehefa mandeha bisikileta?
Ny haavon'nynyny lasely dia zava-dehibe amin'ny toerana faran'izay mahazo aina sy ny fomba mitaingina azo antoka. Rehefa mipetraka eo amin'ny lasely ianao dia samytongotra tokonymahatratra ny gorodona sy ny baolina an'nytokony ny tongotraohomikasika ny tany. Mikatona ireo bara vytokony ny bisikiletanaomifanaraka tsara amin'nynylasely na somary ambonin'ilay lasely.
Inona no hitranga raha ambany loatra ny sezan'ny bisikiletanao?
FAMANTARANAny laselyomety ho diso ny haavony
Na dia misy aza ny antony hafa mahatonga ny hafa, ary samy hafa ny valin'ny tsirairay, matetikalaselyizany diaambany loatrahiteraka fanaintainana amin'nynymanoloananylohalika raha iray izanyavo loatramiteraka fanaintainana ao aorianynylohalika - na ao anatinynykofehy toynyvokatry ny fandaniana tafahoatra.29 Aogositra 2019
Tokony mahitsy ny tongotrao rehefa mandeha bisikileta?
Rahovianamitaingina bisikileta ianao,tongotrao tokonylasa tanterakaMahitsyrahoviananypedal dia amin'nynyambany indrindranyny tsingeriny. amin'nynylohalikaMahitsy, aryny tongotramivelatra tanteraka. Eny, eny,tongotrao tokonyhomahitsy rehefa mitaingina bisikileta. Na izany aza, misy olona manolo-kevitra ny hitazona niondrika kely fotsinynylohalika.23 apr 2021
Tsara kokoa ve ny mahazo boaty bisikileta kely kokoa?
Raha mila hafainganam-pandeha mihoatra ny fampiononana ianao, azana-kazo kely kokoamety mifanaraka aminaotsara kokoa, ohatra. Tsy misy lalàna sarotra sy haingana eto. Ny tsara indrindrabisikiletamety aminao dia fitambaran'ireo fandrefesana rehetra ireo sy ny fanao amin'ny mitaingina anao manokana ary ny safidinao.12 Jona. Feb 2020
Mety ve ny mitaingina bisikileta kely kokoa?
nykelikely kokoaNy frame dia tsy dia azo antoka loatra, ary mora vaky, noho ny adin-tsaina lehibe kokoa amin'ny firafiny; hazo lava sy tsato-kazo lava kokoa dia midika hoe levers lehibe kokoa hampihatra hery amin'ny frame. Saingy tsy tokony hisy vokany lehibe izany.
Ahoana no ahafantarako raha ny bisikiletako no mety habe?
Mijoroa ambonin'ny frame. Ho an'ny ankamaroan'ny mpitaingin-tsoavaly, ny dingana voalohany hahazoana ny haben'ny bisikileta dia ny mijoro eo ambonin'ny zorony miaraka amin'ny tongotra roa amin'ny tany. Ny fehezam-by bisikileta mandeha tsara dia tokony hanana iray na iray na roa ny fahazoan-dàlana eo anelanelan'ny fantson'ny tampon'ilay sary sy ny vatolampinao.
Inona no fomba tsara indrindra hifanarahana amin'ny bisikileta?
Tsy maintsy manomboka amin'ny haben'ny bisikileta na habe amin'ny endriny ianao, izay mety tsara amin'ny haben'ny vatanao. Avy any, azonao atao ny manitsy mora foana ny haavony sy ny toeran'ny seza ary ny fitoeran-tànana mba hampifanarahana tsara azy ireo.
Inona no tokony hotadiaviko anaty boaty bisikileta?
Diniho ny haben'ny fehezan-kevitra narosonao talohan'ny nividiananao. Samy hafa kely ny vatan'ny tsirairay, ary ny refin'ny sandry sy ny tongotra ary ny torso dia mety hidika fa mila endrika hafa mba hahatsapanao aina. Ampiasao ny fandrefesanao inseam mba hahazoana habe fanombohana, avy eo mankanesa any amin'ny fivarotana bisikileta eo an-toerana ary hizaha azy.